“ပြီးပြည့်စုံသော မိသားစု”ဆိုသည်မှာ မိမိနှင့် မိမိ၏ နှလုံးသား တစ်ခြမ်းတို့ လိုလားတောင့်တသော အရာဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ချစ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် နားလည်မှုတို့အပြင် အခြားသော အရေးပါပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအရာ၊ မိမိ၏ အိမ်ထောင်သည်ဘဝကို ပြည့်စုံစေသည့်အရာမှာ “သားသမီး"ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သားသမီးဆိုသည်မှာ မိမိ၏ အိမ်ထောင်သည်ဘဝကို ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပြည့်စုံလာစေသော အရေးကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။ ခင်ပွန်းသည်တစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေသာ အမျိုးကောင်းသားတစ်ဦးကို “ဖခင်"တစ်ဦး အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားစေ၊ အသိအမှတ်ပြုခံရစေသူဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုလည်း ဇနီးသည်အဖြစ်မှ “မိခင်"အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သူလည်းဖြစ်သည်။
ဆေးရုံ ဆေးခန်းပေါင်း ၄၇ ခုကျော်မျှရှိနေသော Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) သည် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဆေးပညာကို အသုံးပြုလျက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍကို ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို နောက်အဆင့်သို့ မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ‘ကြိုတင်ကာကွယ် ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်သည်” ဟူသော ယုံကြည်မှုဖြင့် ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးကို ပိုင်ဆိုင်လိုသူများအတွက် BDMS Wellness Clinic ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားစေသည့် အကြောင်းရင်းများကို သိရှိနိုင်ရန်၊ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများကို အကဲဖြတ်ရန်၊ အနာဂတ်တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရန်အတွက် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို မျိုးဗီဇအဆင့်အထိ စစ်ဆေးနိုင်ရန် အတွက် နော်ကဆုံးပေါ် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ထို့အပြင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း ကျန်းမာရေး တိုးတက်စေရန်အတွက် လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲရေးနှင့် ပတ်သက်သော အကြံပြုချက်များလည်း ပေးပါသည်။
ဘန်ကောက်မြို့လည်တွင်ရှိသော BDMS Wellness Clinic သည် ကြီးမားသော သစ်ပင်ပန်းမံများ၊ လေကောင်းလေသန့်များဖြင့် ဝန်းရံထားပါသည်။ ထို့အပြင် တန်းဖိုးမြင့်မားသော အိမ်ခြံမြေတွင်ရှိနေသည့် စိမ်းလန်းသော နယ်မြေလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အရေးကြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အမျိုးမျိုးသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တို့ဖြင့် ဝန်းရံထားသည့် The BDMS Wellness Clinc သည် ယနေ့ခေတ်၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ပြီးပြည့်စုံမှု အရှိဆုံးသော နေရာလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် လူများအား ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရန်၊ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ၊ အလုပ်နှင့် နေ့စဥ်ဘဝ မျှတစွာဖြင့် အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်အောင် နှိုးဆော်ပါသည်။
BDMS Wellness Clinic မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆေးပညာကို ဦးတည်ထားသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပေးခြင်း၊ သက်ရှည်ကျန်းမာသော ဘဝရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ယနေ့ခေတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ လူနေမှုပုံစံများ၏ ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် စံပြုအပ်သော “ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာအတွက် ကျန်းမာရေးဆေးခန်း”အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်လောက်အောင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆေးပညာရှင်များ၊ ခေတ်သစ် နည်းပညာအသုံးပြုမှုများဖြင့် အားဖြည့်ထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည့် လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်ဖန်တီးပေးထားသော ပြီးပြည့်စုံသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှတစ်ဆင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနေပါသည်။ သက်‌ရှည်ကျန်းမာ‌ အရည်အသွေးရှိသော ဘဝကို ရရှိလိုသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ မိတ်ဆွေများအတွက် အကူအညီပေးရန်လည်း အသင့်ဖြစ်နေပါသည်။
BDMS Wellness Clinicရှိ Fertility Clinic ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်သလဲ
လူတစ်ဦးချင်းစီတွင် အခြားလူနှင့်မတူသော လူနေမှုပုံစံရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံများပြားသော ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့အနေဖြင့် တစ်ဦးချင်းအတွက် သိသန့်ဆောင်ရွက်ပေးထားသော ကုသရေးအစီအမံများဖြင့် သင့်အတွက် သီးသန့်ဖန်တီးပေးထားသော အကြံပြုလမ်းညွှန်ချက်များ၊ ကုသမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထူးခြားသော တည်နေရာ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် သင့်အနေဖြင့် လူရှုပ်သဖြင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းမျိုး ကြုံရမည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးခန်းသို့ လာရောက်စဥ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်မှုကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။
ဖုန်းဖြင့် အကြံပြု ဆွေးနွေးပေးခြင်း
သင့်တွင် ပြဿနာတစ်ခုခု သို့မဟုတ် စိတ်မအေးခြင်းများ ခံစားနေရပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအနေဖြင့် နံနက် ၈ နာရီမှ ည ၈ နာရီအတွင်း သင်၏ မေးမြန်သမျှကို အကြံပြုဆွေးနွေး ဖြေရှင်းပေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါသည်။
အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းမှာ ကိုယ်ဝန်မရခြင်းကို ကုသမှုများတွင် အရေးအကြီးဆုံးသော အ‌ရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့သည် ကုသမှုခံယူရေးအတွက် သင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်အတွင်း သင့်ကို ကူညီပေးရန်အတွက် ရိုးသားသော အကြံပြုချက်များပေးရန် အသင့်ရှိနေကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် နိုင်ငံသားအမျိုးမျိုးအတွက် ကိုယ်ဝန်မရရှိခြင်းကို ကုသပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနေ‌သကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ခံယူနေစဥ်အတွင်း သွားလာလည်ပတ်ရန်အတွက်လည်း နေထိုင်စရာ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် လိုအပ်သည့် ဘာသာအလိုက် စကားပြန်များလည်း ထားရှိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Fertility Clinic သည် ကလေးမရနိုင်သည့် ဇနီးမောင်နှံများအတွက် 3Ps သဘောတရားများကို လက်ကိုင်ထားလျက် အစီအစဥ်ရေးဆွဲ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ကူညီပေးရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
1. Prevention (ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း) ကလေးမရနိုင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် မိခင်ရော၊ ကလေးအတွက်ပါ ပြဿနာများမရှိအောင် အစီအမံရေးစွဲ ချဉ်းကပ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့က အလေးပေးပါသည်။
2. Personalization (တစ်ဦးချင်းအတွက် သီးသန့် ဖန်းတီး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း) ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံမြင့်မား၊ များပြားသော ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့သည် ဧည့်သည်တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်းကို တန်ဖိုးထားပါသည်။ သင်၏ လိုအပ်ချက်ကို အခြေခံထားသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ပေးရန်အတွက် အကြံပြုချက်များ၊ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်ပေးထားသော ကုသရေးအစီအမံများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
3. Precision (တိကျခြင်း) BDMS Wellness Clinic သည် ကုသရေးအောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မားစေရန်နှင့် အနရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သိပ္ပံနည်းကျ၊ နည်းပညာအသုံးပြု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အသေးစိတ် သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံထားပြီး လျင်မြန် တိကျသော ကုသရေးများ ဆောင်ရွက်ရန် အလေးပေးထားပါသည်။
သွားလာနေထိုင်ရ အဆင်ပြေပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံမှု မြင့်မားခြင်း
Fertility Clinic က ဘန်ကောက်မြို့လယ်တွင် တည်ရှိခြင်း
ဆေးခန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ရှုပါ။